FMUSER 20kW Isku-dhafan UHF Stretchline ee Iibka ah
Ku saabsan FMUSER 20KW UHF Stretchline Combiner
FMUSER Tuning Channels 20kW UIsku-duwaha HF Stretchline wuxuu si fiican ugu shaqeeyaa:
Codsiga ee 20kW Pow sareer Isku-darka fidsan UHF waxay dabooli kartaa baahida sii kordheysa ee baahinta, xallinta dhibaatada meel bannaan oo ku taal munaaradda anteenada. Dhammaanteen waan ognahay in isku-darka isku-dheelitirka ah ee UHF ee xarumaha TV-ga loo yaqaanno Combiner Constant Impedance Combiner (CIB), oo la mid ah Nidaamka Soo noqnoqda Raadiyaha tignoolajiyada ayaa ah xalka ugu fiican ee baahinta qiimaha jaban ee baahinta TV-ga.
The FMUSER 20kW UHF fidsan isku dar for sale, kaas oo quseeya tignoolajiyada horumarsan ee RF iyo tignoolajiyada CAD ee ugu dambaysay, waxa ay wadar ahaan 6 dalool soo geliyeen dekedo, taas oo la macno ah in ay u gudbin karto calaamadaha dhawr lamaane oo TV-ga adag ee TV-ga si isku mid ah u gudbiya. Waxaa si aan kala go' lahayn u naqshadeeyay oo u horumariyay sannado badan farsamoyaqaannadayada RF ee khibradda leh, taas oo macnaheedu yahay tan Isku-darka awoodda sare ee UHF iib ah la yimaada tayo la isku halayn karo iyo qiimo jaban.
Talo-siinta Isticmaalka 20kW UHF Siskudariyaha tretchline
Waxyaabo dhowr ah oo ay tahay in la ogaado marka la isticmaalayo 20kW UHF Stretchline Combiner
Qaybta hore waa Talo-siinta Isticmaalka 20kW UHF Stretchline Combiner | Skip
Qalab noocee ah ayaa lagu magacaabi karaa qalab warbaahineed oo heer sare ah? Tani waa su'aal mudan in laga fikiro. Tusaale ahaan isu-duwaha. Boqolaal jawaab celin iib ah oo isku-darka RF-ga ah ee lagu iibiyay adduunka oo dhan, waxaan helnay waxyaabo xiiso leh: in ka badan kala bar macaamiisheena ayaa sheegay in aysan tixgelin qiimaha iyo muuqaalka markii ugu horeysay markii la sameeyay baaritaan. Taas beddelkeeda, waxay soo jiiteen qaar ka mid ah tafaasiisha dadka caadiga ah aysan fiiro gaar ah u yeelan karin, tusaale ahaan, markii Denny oo ka yimid Cameroon uu muujiyay xiisaha badan ee mid ka mid ah xalalka furaha baahintayada ee raadiyaha degmada, waxaan siinay mid loo habeeyey oo badan. qaab dhismeedka 20kW iskudariyaha gudbiyaha oo leh saddex godad. Muuqaalka ugu weyn ee qaabkani waa qaab-dhismeedkiisa fudud iyo isku-dhafka ku-meel-gaadhka ah ee ku habboon. Dhab ahaantii, idaacada Denny waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan aagga, iyo in 20kW UHF fidsan isku dar ayaa wali u adeegaya Denny iyo dhagaystayaashiisa tan iyo 2014. Dabcan, tani waa mid ka mid ah jawaab celinta iibka ka dib ee wanaagsan ee isku-darkayada RF. Macaamiil badan oo kale ayaa qiimeeyay in isku-darkayaga uu leeyahay koror heerkul yar, naqshadaynta awoodda awoodda koronto ee xirfadleyda, isku-darka awoodda, iwm. Waxaan leenahay karti iyo kalsooni aan ku siinno adeeg baahinta oo wanaagsan
Waxaad u baahan tahay 20kW UHF StRetchline Combiner In ka badan abid
Tusmada Korontada ee Muhiimka ah ee 20kW UHF fidsan Combiner
An 20kW UHF TV isku dhafka ah laga bilaabo FMUSER waxa loo istcimaalaa in lagu daro RF laga helo ilo kala duwan. Isku darka UHF waxaa loo isticmaali karaa codsiyo kala duwan oo aad u tiro badan si loo gaaro natiijooyin kala duwan.
Waxa aad u baahan tahay inaad ka ogaato ku saabsan 20kW UHF Stretchline Combiner
Tusmada Korontada ee FMUSER 20kW UHF Stretchline Combiner (Tixraac Kaliya)